UN General Assembly New York yakapinda neVatungamiriri veNyika vachitarisa: "Musasarudze Kutsakatika! Ndeipi chikonzero chenyu?"
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba kwekushanya » UN General Assembly New York yakapinda neVatungamiriri veNyika vachitarisa: “Musasarudze Kutsakatika! Ndeipi chikonzero chako?"
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Sustainability News • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
UN General Assembly New York yakapinda neVatungamiriri veNyika vachitarisa: “Musasarudze Kutsakatika! Ndeipi chikonzero chako?"
Aïssa Maïga achirekodha izwi redhinasaro rekombuta rinoratidza mufirimu pfupi pfupi rechirongwa cheUN Development Programme's Don't Choose Extinction kuti vazivise nezvekuchinja kwemamiriro ekunze. Mufananidzo: Simon Guillemin
Ichipinda muImba yeGeneral Assembly Hall, ine mukurumbira nekutaura kwenhoroondo nevatungamiriri kubva pasirese, dinosaur inoyevedza inoudza vateereri vakakatyamadzwa uye vakakatyamadzwa vamiriri nevanoremekedzwa kuti "yave nguva yekuti vanhu vasiye zvikonzero uye vatange kuita shanduko" kugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze.
Firimu rekutanga kuitwa mukati meUN General Assembly.
United Nations Development Programme (UNDP) iri kuunza dinosaur inotyisa, inotaura kumuzinda weUnited Nations kuti ikurudzire mamwe maitiro emamiriro ekunze kubva kuvatungamiri venyika.
Mufirimu pfupi rakatangwa nhasi sepakati pemushandirapamwe mutsva wesangano we 'Usasarudza Kuparara'.
“Zvichida taiva ne<em>asteroid,” dinosaur rinonyevera kudaro, richinongedzera kurondedzero yakakurumbira inotsanangura kutsakatika kwema<em>dinosaur makore ane mamiriyoni 70 apfuura. “Chii chikonzero chako?”
Iri bhaisikopo rekutanga kuitwa mukati meUN General Assembly pachishandiswa mifananidzo inogadzirwa nekombuta (CGI) rine vanhu vane mukurumbira pasi rose vanotaura dhinosaur mumitauro yakawanda, kusanganisira vatambi. Eiza González (ChiSpanish), Nikolaj Coster-Waldau (Danish), uye Aïssa Maïga (French).
Dinosaur inoenderera mberi ichisimbisa kuti tsigiro yemari yemafuta ezvicherwa kuburikidza nerubatsiro - mari yevateresi inobatsira kuti mutengo wemarasha, oiri uye gasi udzikire kune vatengi - hazvina musoro uye hazvina musoro mukutarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Funga nezvezvimwe zvinhu zvese zvawaigona kuita nemari iyoyo. Munyika yose vanhu vari kurarama muurombo. Haufungi here kuti kuvabatsira kungaita zvine musoro kupfuura… kubhadhara kuparara kwemarudzi ako ese?” dinosaur anodaro.
"'Firimu rinonakidza uye rinonakidza, asi nyaya dzarinotaura nezvadzo hadzina kunyanyoipa," akadaro Ulrika Modéer, Mukuru weUNDP's Bureau for External Relations and Advocacy. “Munyori Mukuru weUN akadana dambudziko remamiriro ekunze kuti 'kutsvuka kwevanhu.' Tinoda kuti firimu rifadze, asi isu tinodawo kusimudzira ruzivo rwekuoma kwakaita mamiriro ezvinhu. Nyika inofanirwa kusimuka padanho remamiriro ekunze kana tichida kubudirira kuchengetedza pasi redu kune zvizvarwa zvinotevera. "
Sangano reUNDP re'Usasarudza Kuparara' uye firimu rine chinangwa chekuvheneka pachena nezverubatsiro rwemafuta ezvicherwa uye kuti vari kukanzura sei budiriro huru mukupedza kushanduka kwemamiriro ekunze uye vari kufambisa kusaenzana nekubatsira vapfumi.
Tsvagiridzo yeUNDP yakabudiswa sechikamu chemushandirapamwe uyu inoratidza kuti pasi rose rinoshandisa mari inoshamisa yeUS$423 bhiriyoni pagore kupa rubatsiro rwemafuta ezvicherwa zvevatengi - oiri, magetsi anogadzirwa nekupiswa kwemamwe mafuta, gasi nemarasha.
Izvi zvinogona kubhadhara mutengo wekudzivirira kweCCIDID-19 kumunhu wese ari munyika, kana kubhadhara katatu mari yepagore inodiwa kupedza hurombo hwakanyanya pasi rose.
Mushandirapamwe uye bhaisikopo rinotarisira kuita kuti dzimwe nguva dzakaoma uye dzehunyanzvi nyaya dzine chekuita neFossil Fuel Subsidies uye nemamiriro ekunze ekukurumidzira kuti zviwanikwe. Kuburikidza nezviito zvakasiyana izvo zvinokokwa veruzhinji kuti vatore, chinangwa ndechekudzidzisa uye kupa izwi kuvanhu pasi rose.
Firimu re'Usasarudze Kuparara' rakagadzirwa mumubatanidzwa naActista Los Angeles (sangano rakahwina mibairo yakawanda rekugadzira), David Litt (Munyori wekutaura weMutungamiriri weUnited States Barack Obama) uye Framestore (situdhiyo yekugadzira kumashure kwaJames Bond, Guardians of the Galaxy, Avengers End Game). Wunderman Thompson akavaka dhijitari ecosystem yechirongwa chekugonesa vanhu pasi rese kuti vatore matanho uku Mindpool ichigadzira chishandiso chehungwaru chekubatana chepuratifomu yemushandirapamwe.
PVBLIC Foundation, isangano risingaite purofiti rinounganidza midhiya, data, uye tekinoroji yebudiriro inogoneka uye kugarisana munharaunda pasirese, iri kupa hunyanzvi hwekutaurirana nerutsigiro rwenhau. Sustainable accessories brand BOTTLETOP uye #TOGETHERBAND kufamba kwavo vari kubatana neUNDP uye vachange vachigadzira zvekutengesa neBrazilian muimbi Speto kubatsira mushandirapamwe.
Tsvaga zvimwe nezvemushandirapamwe pa www.dontchooseextinction.com